eParewa || Peace and Prosperity » मोटो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यी उपायहरु अपनाउदा मोटोपना घट्छ
मोटो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यी उपायहरु अपनाउदा मोटोपना घट्छ
२०७५ माघ १० गते बिहिबार ०४:५६
स्वास्थ्यसंग सम्बन्धीत विभिन्न रोगहरु विना उपचार निदान गर्न विभिन्न उपायहरु पनि अपनाउन सकिन्छ । विभिन्न उपायहरुमध्ये योगा पनि एक हो । योगाले तपाईको शरीरको कयौँ किसिमका समस्याहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ । यदी तपाई मोटोपन अथावा पेट...
स्वास्थ्यसंग सम्बन्धीत विभिन्न रोगहरु विना उपचार निदान गर्न विभिन्न उपायहरु पनि अपनाउन सकिन्छ । विभिन्न उपायहरुमध्ये योगा पनि एक हो । योगाले तपाईको शरीरको कयौँ किसिमका समस्याहरुबाट छुट्कारा दिलाउँछ । यदी तपाई मोटोपन अथावा पेट संम्बन्धी समस्या छ भने योगमुद्रासन तपाइको लागि लाभकारी हुनसक्छ । योगा गर्नाले मोटोपन, एसिडिटी र पाचनक्रिया दुरुस्त भई टाउकोमा रक्तपूर्ती हुन्छ भने एकाग्रता हुन्छ ।
कसरी गर्ने योगा ?
सबैभन्दा पहिला वज्रासनमा बस्नुहोस, शरीरलाई सीधा र दुबै हातलाई जाँघमा राख्नुहोस । सास भर्दै दुबै हातलाई माथि उठाउँदै पीठ पछाडी लैजाने । र बायाँ पाखुरालाई दायाँ हातले समात्ने । सास छाड्दै शरीरलाई अगाडीतर्फ झुकाउने । शिरले जमिनलाई नछोएसम्म पीठलाई सिधा राख्नुहोस र क्षमता अनुसार रोकिराख्नुहोस । अब बिस्तार –बिस्तारै सास लिँदै माथि उठ्नुहोस । आतलाई टाउकोमाथि लैजानुहोस र फेरी सास छाड्दै फेरी जाँघमा हात राख्नुहोस । यसरी वज्रासन योगा गर्न सकिन्छ ।
यो आसन बिहान खाली पेटमा गर्नु फाईदाजनक हुन्छ । अन्य स्थितिमा खाना खाएको ३ घण्टापछि गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रियालाई २–५ पटक गर्न सकिन्छ । ९ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुले यो आसन गर्नुहुँदैन । त्यस्तै गर्भवती महिला, रिंगटा लाग्ने, उच्च रक्ताचाप र गानोको समस्या भएकाहरुले पनि यो आसन गर्नु हुँदैन । शरीरमा कयौँ किसिमका हानिकारक तत्व उत्पादन भईरहेको हन्छ । धेरे पानी पिउनाले पनि दुषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । तर कुनै यस्तो खास पदार्थको नियमित सेवनले पनि शरीरमा भएका दुषित पदार्थहरु आफै बाहिर निस्कन्छ । र जसको सेवन शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ । जुन यसप्रकार छ ।
नरिवल पानी ः कम क्यालोरी र कम सोडियम भएको नरिवल पानीमा कोलेस्ट्रोल र चिल्लोपना कम हुन्छ । यो छालालाई भित्रबाट पोषण प्रदान गर्छ । र पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउँछ ।
लसुन ः अचार वा सब्जीमा लसुनको नियमित प्रयोग प्रायजसो फाईदाजनक हुन्छ । लसुन मात्र रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई विकास गर्ने नभई शरीरबाट दुषित पदार्थलाई निकाल्न मद्धत पनि गर्छ ।
अदुवा ः अदुवालाई सागसब्जीमा पनि प्रयोग गर्न सकिनुका साथै चिया र तातो पानीमा मिलाएर सेवन गर्न सकिन्छ । यसले पनि शरीरमा भएको फोहोर पदार्थ बाहिर निकाल्न मद्धत गर्छ ।
ग्रीन टी ः यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाईने हुनाले फ्री र्‍याडिकल्सलाई कम गर्छ । ग्रीन टीले दीमागि कार्य क्षमतामा बृद्धि गर्दै स्मरण शक्ति तेज बनाउँछ ।
प्रकाशित मिति २०७५ माघ १० गते बिहिबार ०४:५६